डा. राजीवकुमार झा सानै उमेरमा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर बन्ने नेपाली युवा हुन् । चीनको सियान विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत प्रोफेसर झाको नाममा रिसर्च सेन्टर नै स्थापना भएको छ । चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँग प्राध्यापाक झाको सुमधुर सम्बन्ध छ । नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि उनको उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ । विश्वविद्यालयको प्रोफेरको रूपमा उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध जोड्ने सेतुको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
चीनको सान्सी प्रान्तले प्राध्यापक झालाई चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासमा उलेख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नागरिक दूत नियुक्त गरेको थियो । सियान प्रान्तले चिनियाँ बृहत् आयोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ सम्बन्धी नेपालमा सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्ने दूतका रूपमा पनि नियुक्त गरेको छ । प्राध्यापक झासँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न आयाम, बीआरआईको कार्यान्वयन लगायत समसामयिक विषयमा कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार:
नेपाल–चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था
आजभन्दा २२ वर्ष पहिले म सियान जाँदा त्यहाँका ९९ प्रतिशत जनतालाई नेपाल भनेको खासै थाहा थिएन । नेपालको नाम लिँदा कोही अफ्रिकामा हो ? अमेरिकामा हो ? भनेर प्रश्न गर्दथे । आज २२ वर्ष पछाडि नेपालको राम्रो पहिचान भएको छ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनेर शायद ९९ प्रतिशत जनतालाई थाहा छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालप्रति चिनियाँ जनताको चासो बढ््यो । उनीहरूलाई नेपालबारे धेरै थाहा हुन थाल्यो । यसको अर्थ पक्कै पनि हाम्रो सम्बन्ध बढ्यो । चिनियाँ जनताको मुखबाट नेपाल र नेपालीको बारेमा कुनै नराम्रो कुरा सुनेको छैन । हाम्रो सम्बन्ध उचाइमा पुगेका कारण नै चिनियाँमा नेपालप्रति ‘पोजेटिभ भाइव’ आएको हो । मान्छेले जसलाई माया गर्छ, उसलाई नै प्रेम गर्ने हो । चिनियाँहरू नेपालको बारेमा नराम्रो सुन्न चाहँदैनन् । माथिदेखि तलसम्म सम्बन्ध राम्रो भएको सुन्न पाइन्छ ।
चीनले जहिले पनि नेपालको संस्थापन पक्षलाई विश्वास गर्ने गरेको छ, विगतदेखि अहिलेसम्म । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनन् उनीहरू । नेपाली जनताले रोजेको सरकार र व्यवस्था हाम्रा लागि मान्य हुन्छ भन्ने चिनियाँको अटूट विश्वास छ । राजनीतिक स्थिरता नहुनुमा उनीहरूको चिन्ता छ । सरकार फेरिपिच्छे अलग सम्झौता हुने, नीति परिवर्तन हुने कारणले गर्दा अहिले नेपालमा कुनै कुरा गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने विगतमा चिनको धारणा थियो । नेपालीलाई विश्वास नगरेर होइन राजनीतिक स्थिरता नभएका कारणले हो । अहिले त्यो अवस्था छैन । विगतमा अवस्था कस्तो रह्यो भने एउटा सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न ६ महिना वा वर्षदिन लाग्ने अनि त्यो बेलासम्म सरकार नै परिवर्तन भइसक्ने । सरकारैपिच्छे प्राथमिकता फरक–फरक हुन्छ । नेपालको विकास भन्दापनि भोलिको चुनावलाई हेरेर सरकारले काम गर्ने अवस्था थियो ।
हाम्रोमा पूर्वाधार शून्य छ । कोही पर्यटक नेपाल आउँदा एयरपोर्टदेखि नै निदार खुम्चिन्छ । एयरपोर्टमा पर्यटक आउँदा त्यहाँको माहोल देख्यो भने खसी बजार हो कि पहिलाको गोंगबु बसपार्क भनेर छुट्याउन सकिँदैन ।
अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएर मात्र होइन, जोसुकैको सरकार भएपनि स्थिर सरकार हुँदा चीनलाई काम गर्न सहज हुन्छ । भोलि अर्को पार्टीको सरकार बन्दापनि चीन यसैगरी जाने हो । नेपालमा चीनको विश्वास जित्नका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ ।
चीनले नेपाललाई कति महत्त्व दिइराखेको छ ?
छिमेकी देश भनेर चीनले सीमा जोडिएको सबै देशलाई निकै महत्त्व दिइरहेको छ, नेपालल सहितका देशलाई । चिनियाँ राष्ट्रपति शी भर्खरै मात्र उत्तर कोरिया जानु भयो, श्रीलंका जानु भयो र भारत पनि । छिमेकलाई महत्त्व दिने कुरा त चीन सरकारको प्राथमिकतामै पर्छ । नेपाल चीनको सधैँ महत्त्व र प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ ।
जो सँग १४ सय किलोमिटर बाउन्ड्री जोडिएको छ, जोसँग आवत–जावत छ, त्यो देश गरीब हुने भन्ने चीनले सोच्नै सक्दैन । छिमेकीको घरमा फोहोर होस्, अशिक्षा होस्, गरीबी होस् भनेर कसैले सोच्छ र ? नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चीन सधैँ चिन्तित छ । चीन मात्र होइन भारत पनि नेपालमा आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै गरेको हेर्न चाहन्छ । नेपालमा आर्थिक समाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, आर्थिक विकास उच्च हुनुपर्छ, पूर्वाधारको विकास र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु पर्छ, नेपालीहरू धनी हुनुपर्छ, धनी भएपछि बल्ल नेपाल स्थिर हुन्छ भन्ने चीनको मान्यता रहँदै आएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि सँगसँगै जाने चिज हुन् । जति आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ, सरकार त्यति नै बलियो भएर जान्छ । स्थिर सरकार बन्नका लागि आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । नेपालले आर्थिक विकास गर्नुपर्छ, दुई छिमेकीसँग मिलेर जतिसक्दो लाभ लिनुपर्छ भन्ने चीनको नीति देखिन्छ । उत्तरी छिमेकीको मात्र होइन दक्षिणी छिमेकीको पनि त्यही चाहना बुझिन्छ । यसमा छिमेकीको विश्वास कति आर्जन गर्ने त्यो त नेपालको कुरा हो । कुनै छिमेकीलाई दोष देखाउनुभन्दा दुवै देशलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो विकासको गतिलाई बढाउँदा नै नेपाली जनतालाई सुखी राख्न सकिन्छ, त्यसैले नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउँछ । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा स्थिरता ल्याउन पनि त्यसले सहयोग पुर्‍याउँछ ।
चीनसँग भएका सहमति र सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् ?
सन् २०१६ मा प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा १५ वटा सम्झौता भएका थिए । प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रतिनिधि हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय या विभागले हो । सम्झौता किन कार्यान्वयन भएको छैन, सरकारसँग बुझ्नुस न !
व्यापार पारबहन सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन शुरू भएन । के सम्झौता भयो, किन कार्यान्वयन भएन ? कहाँ अड्केको छ ? तपाईंहरूले पनि खोज्नुपर्‍यो, लेख्दिनुपर्‍यो । नेपालबाट अड्कियो या चीनबाट अड्क्यो ? सम्झौता गर्ने निकायमा सोध्नुस् थाहा भइहाल्छ नि !
मलाई के लाग्छ भने चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र दुवैको कमजोरी बराबरी छ । कहाँ समस्या छ भन्दा सन् २०१६ मा प्रधामनन्त्रीले एउटा सम्झौता गरेर आइसकेपछि तीन–चार महिनामै सरकार परिवर्तन भयो । त्यो सरकारले काम गरेन किनभने त्यो सरकारको आयु ९ महिना मात्र थियो । अर्को सरकार पनि ९ महिने थियो । २०१६ पछिको तीन वर्षको समय त चुनावी तयारी मै बित्यो, ९ महिने अस्थिर सरकार बन्यो । अस्थिरता हँुदा ब्यूरोक्रेसीले खेल्ने मौका पायो । भएका सम्झौता कार्यान्वयन किन भएन कसले सोध्ने उनीहरूलाई ? प्रशासनिक नेतृत्व कसैसँग डराउन छाडे । म कुनै एउटा कामको लागि सरकारी कार्यालयमा जान्छु, ५० ठाउँमा अल्मल्याइदिन्छन्, विदेशी लगानीकर्तालाई कस्तो झञ्झट होला ?
हामीले बीआरआईलाई रोड मात्र हो भनेर सोच्छौं भने त्यो न्यारो कन्सेप्ट हो । हवाइजहाजबाट आउने पनि बीआरआई हो, समुद्री मार्गबाट आउने पनि बीआरआई हो ।
चीनसँग भाषागत समस्या पनि छ । कुनै देशसँग सम्बन्ध बनाउँदा त्यो देशको भाषा र संस्कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रोमा चिनियाँ भाषामा ब्यारियर छ, उहाँहरूले हामीलाई बुझ्ने र हामीले चिनियाँलाई बुझ्ने तरिका फरक छ । त्यसैले सांस्कृतिक आदानप्रदान बढी भयो भने जनता–जनताबीचको सम्बन्ध बढ्छ, जनस्तरको सम्बन्ध बढ्दा सम्झौता कार्यान्वयको इफिसेन्सी बढ्छ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्नेबित्तिकै व्यापार तथा पारबहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर त भयो । विस्तारै विस्तारै हुँदैछ । स्थिरता चाहिन्छ । स्थिरता भयो भने सबै चिज सही बाटोमा अगाडि बढ्छ ।
नेपालमा चिनियाँ रेल आउला ?
नेपालमा भारतीय रेल पहिला कि चिनियाँ रेल पहिला भन्ने बहस किन जरुरी भयो ? नेपालमा चीन र भारतलाई कम्पिटिसन गराउन खोजेको हो र हामीले ? कुरो प्रस्ट नै छ नि, जसलाई सहज हुन्छ त्यो पहिला आउँछ । नेपालमा रेल आए भएन र ? जहाँबाट आएपनि भयो नि ! नेपालमा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु नेपाली दरिद्र मानसिकताको पराकाष्टा हो । नेपालमा रेल आउँछ कि आउँदैन, दुवै छिमेकीबाट रेल आउँदा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भनेर बहस हुनुपर्नेमा कसको रेल पहिला भन्ने बहस भयो । जसलाई सजिलो हुन्छ, उसैको रेल आउँछ ।
नेपालसँग रेल्वे लाइन जोड्ने चीनको इच्छाशिक्त छ, उहाँहरूले भौगोलिक कठिनाइ चिरेर ल्हासासम्म रेल आइसक्यो । ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेल आइसक्यो, त्यत्रो उचाइमा । सिगात्सेबाट केरुङ ल्याइँदैछ । केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन गाह्रो कुरा होइन, तर भौगोलिक बनावट पनि हेर्नुपर्छ । नेपालको उच्च हिमाली भेगको माटोको स्ट्रक्चर जाडोमा, गर्मिमा र मनसुनमा फरकफरक हुन्छ । रेल पहाड घुमाएर ल्याउने कि टनेल बनाएर ल्याउने कि ?
केरुङ–काठमाडौंको भौगोलिक अवस्था सबै समथर भूमि त होइन । रेलका लागि कति अध्ययन चाहिन्छ, हामीलाई भने तत्कालै चाहिएको छ । हो, संसारभरि रेलको सञ्जाल जोडिन्छ । रेल सस्तो र सरल पनि छ । नेपाल पनि यो चिजबाट अछुतो रहँदैन । चिनियाँहरू लागिरहेका छन् । नेपाल पनि लाग्नु पर्‍यो नि ! नेपालमा त रेल्वे विभाग निष्क्रिय छ, पर्याप्त रेल इञ्जिनीयर छैनन् । कसले के परीक्षण गरेर के प्रतिवेदन दिने ? नेपालमा रेल्वे विज्ञ छैनन्, सबैचिज उतैबाट गर्नुपर्ने भयो ।
रेल्वे कनेक्टिभिटीमार्फत दुवै देशले नेपाललाई सहयोग गर्न खोजेका छन् । जहाँबाट सम्भव हुन्छ, नेपालमा रेल आए पुग्यो । नेपालले छिमेकी देशलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु भएन । नेपालको रेल्वेसँग जोडिने सपना पूरा हुन्छ ।
चीनसँगको सडक कनेक्टिभिटी
नेपाल–चीन जोड्ने रोड निर्माण गर्दा पर्यावरण बिग्रिन्छ भनेको कुरा पनि सुनियो । पर्यावरण त बिजुलीले पनि बिगार्दै छ नि ! मोबाइल चलाउँदा इलेक्ट्रोम्याग्नेसेटिक वेब आउँछ । आज एयरपोर्ट बनाउँदै छौं, रुख काट्न लागेको भनेर विरोध हुन्छ । के रुखमाथि एयरपोर्ट बन्छ त ? तपाईंलाई एयरपोर्ट पनि चाहिएको छ, पर्यटक पनि चाहिएको छ, तर सडक बनाउन नहुने ? एयरपोर्ट नबनाउने ? अनि हामीले कसरी समृद्धि हासिल गर्ने होे ?
मानिलिऔं विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरण बिग्रेला, तर पर्यावरण सन्तुलन राख्न पनि सकिन्छ त ! विकसित देशले विकास गर्दा रुख काटिएका थिएनन् र ? तर काटिएको रूखको सट्टा धेरै रुख रोप्ने कुरा पो सही हो त । संसार परिवर्तन हुँदैछ, त्यसलाई हामीले पच्छ्याउन जरुरी छ । दश वर्षपछि संसारले हामीलाई आदिवासी नभनोस् । अहिलेको मेन्टालिटीले हामी आदिवासी बन्ने बटोमा अग्रसर हुँदैछौ । अफ्रिकामा नेसनल जिओग्राफीले डकुमेन्ट्री बनाउँछ नि, हामी पनि त्यही बन्छौं कि भन्ने चिन्ता लाग्छ । अमेरिका, चीन र भारतले विकास गर्दा पर्यावरणको कुरा सोचेनन् होला ? सबै देशले सोचे होलान् नि ! हामी उनीहरूभन्दा पनि अगाडि ? विकास र समृद्धि त हामीले विकसित देशबाटै सिक्ने होला नि ! म त मेडिकल स्टूडेन्ट, यो विषयमा वातावरण विज्ञलाई सोधौं न । हामी पर्यावरणविद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरौं न । नेपालको विकास गर्दा कसरी पर्यावरण बचाउने भनेर निष्कर्ष निकलौं न ।
बीआरआई नेपालले फाइदा कसरी लिने ?
चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ (बीआरआई)लाई हामीले –नेपाल)ले संकुचित ढंगले मात्र बुझ्यौं । नेपालको बुझाइमा बीआरआई कनेक्टिभीटी भनेको रोड बनाउने मात्र हो भनेर बुझियो । बीआरआईमा विभिन्न बास्केट छ, पैसा छ । नेपालको अहिलेको परिप्रेक्षमा विकासका लागि पैसा चाहिन्छ, त्यसका लागि ऋण लिन सकिन्छ, बीआरआईमार्फत । नेपालमा कुरा सुन्छु– बीआरआईबाट विकासका लागि ऋण लिँदा ऋणको पासो लाग्छ । विकासका लागि ऋण लिनुको विकल्प के छ ? के पैसा आफैं छाप्ने हो ? घरमा मनी प्लान्ट रोपेर त पैसा आउँदैन होला । टुरिजम छैन, इन्डस्ट्री छैन, इम्पोर्ट छैन कसरी आउँछ त विकासका लागि पैसा ? देशमा पैसा आउनु पर्‍यो । पहिला इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु पर्‍यो नि ! त्यसका लागि ऋण त लिन सकिन्छ ।
नेपालमा कुरा सुन्छु– बीआरआईबाट विकासका लागि ऋण लिँदा ऋणको पासो लाग्छ । विकासका लागि ऋण लिनुको विकल्प के छ ? के पैसा आफैं छाप्ने हो ? घरमा मनी प्लान्ट रोपेर त पैसा आउँदैन होला ।
ऋण लिने पनि आवश्यकता अनुसार हो । मानौं हामीलाई अहिले ५ वटा वोइङ जहाजको आवश्यकता छ, तर हामीले ५ सयवटा बोइङ किन्यौं भने ऋणको पासो लाग्छ, त्यो हामीले उडाउँन सक्दैनौं । चाहिने ठाउँमा ऋण लिने हो, फजुल खर्चका लागि होइन । देश विकासका लागि ऋण लिन खुट्टा कमाउनु पर्दैन । चीन मात्र होइन भारतसँग ऋण लिएर जलविद्युत् आयोजनाको विकास गरौं । बीआरआईबाट ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाऔं, ठूला पूर्वाधारको विकास गरौं ।
हाम्रो आर्जन पर्यटनबाट हो भने पर्यटन सम्पदालाई उच्चस्तरीय त बनाउनु पर्‍यो नि ! हामीले सधँैभरी भनियो वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहियो । अहिलेको एयरपोर्ट सानो भइसक्यो, वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पैसा कसले दिन्छ ? बीआरआई भनेको एउटा बास्केट हो, त्यसमा पैसा छ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार, त्यो पहिचान गरेर ऋण लिने हो । हामीलाई आवश्यकता परेको कुरामा ऋण ल्याउन नहुने ? हामीले यो स्टडी गर्न सक्दैनांै ? हामीलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर उत्पादक क्षेत्रको विकासका लागि बीआरआईबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिउँ ।
बीआरआई भनेको एकवर्षे प्लान होइन, दीर्घकालीन प्लान हो । बीआरआईको कार्यान्वयनले चीनलाई मात्र होइन दक्षिण एसियालाई नै राम्रो गर्छ । नेपालमा आयुर्वेद पाठशाला बनाउने सहमति भयो । सरकारसँग लगानी छैन, पैसा छैन भने चीनसँग मिलेर यहाँ आयुर्वेद पाठशाला बनाऔं न, यो पनि बीआरआई भयो । चीनको कुनै संस्थासँग मिलेर नेपालमा निश्चित संख्यामा टुरिष्ट पठाउने सहमति गरौं, त्यो पनि बीआरआई हो । हामीले बीआरआईलाई रोड मात्र हो भनेर सोच्छौं भने त्यो न्यारो कन्सेप्ट हो । हवाइजहाजबाट आउने पनि बीआरआई हो, समुद्री मार्गबाट आउने पनि बीआरआई हो । दुई वटाको कोअपरेसनमा अस्पताल खोेलेपनि बीआरआई हो । चिनियाँ र नेपाली संयुक्त लगानीमा स्कूल खोलेपनि बीआरआई हो । हजारौं पर्यटक नेपाल ल्याउन सकेपनि बीआरआई हो । बीआरआई भनेको कोअपरेसन हो, यसमा हामीले कसरी लैजान्छौं त्यो हाम्रो कुरा भयो ।
तिब्बत आउने पर्यटकलाई नेपालमा कसरी ल्याउने ?
नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतमा बर्सेनि करोडौं पर्यटकहरू आइरहेका छन्, त्यसको केही हिस्सा मात्र नेपालमा ल्याउन सके पर्यटन विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ । तर हाम्रोमा पूर्वाधार शून्य छ । कोही पर्यटक नेपाल आउँदा एयरपोर्टदेखि नै निदार खुम्चिन्छ । एयरपोर्टमा पर्यटक आउँदा त्यहाँको माहोल देख्यो भने खसी बजार हो कि पहिलाको गोंगबु बसपार्क भनेर छुट्याउन सकिँदैन । पर्यटक त पैसा खर्च गर्न आएको हो नि ! उसले त धेरैभन्दा धेरै सुविधा खोज्छ । सुविधा नभए पर्यटक किन आउँछ नेपालमा ? तर नेपालमा शुरूको प्रवेशदेखि नै समस्या छ । चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न एयरपोर्ट सुधार गर्न जरुरी छ । चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपालमा पूर्वाधार छ ? त्यही अनुसारका होटल छन् ? कोही पर्यटक लुम्बिनी जान चाहन्छ, तर सानो प्लेनमा जान डराउँछ, बसमा जाँदा सडकमा दिनभर लाग्छ । पैसा खर्च गरीगरी फोकटमा समय बर्बाद गर्दैन नि पर्यटकले । बीआरआईबाट लोन लिएर स्तारीय बाटो बनाऔं न, एयरपोर्ट बनाऔं न । एउटा पर्यटक आउनु भनेको यहाँका ५ जनाको परिवार चलाउने व्यवसाय हो नि !
अहिले त पर्यटक ल्याएपनि कमाउने ठाउँ छैन । हामीकोमा त्यो स्ट्यान्डरको सेवा नै छैन । पर्यटकले कहाँ खर्च गर्ने ? त्यो स्तरको चिज चाहियो नि नेपालमा, अनि पो पर्यटनमार्फत समृद्धि हुन्छ ।
के भए चिनियाँ लगानी आउँछ ?
संसारभरि नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआए विकास र समृद्धि हुँदैन । मैले चीनमा के देखें भने वैदेशिक लगानीलाई धेरै प्राथमिकता दिन्छन् कम्युनिस्ट सरकार भएपनि । ट्याक्समा सहुलियत छ । प्रोसेसमा सहुलियत छ । सबै चिजमा सहुलियत छ । नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो छ । नेपालमा विदेशी लगानी आउने भयो भने पाइला–पाइलामा समस्या शुरू गरिदिन्छन् । चीनमा विदेशी लगानीलाई धेरै सहुलियत छ । हामीले पनि आकर्षक फाइदा देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याऔं न । अमेरिकी कम्पनी क्यालीफोरलाई बोलाऔं, केही छूट दिऔं । पछि त्यो लगानी नेपालको हुन्छ । ८० प्रतिशत नेपाली कर्मचारी राख्नुपर्छ भन्ने शर्त राखौं ।
संसार परिवर्तन हुँदैछ, त्यसलाई हामीले पच्छ्याउन जरुरी छ । दश वर्षपछि संसारले हामीलाई आदिवासी नभनोस् । अहिलेको मेन्टालिटीले हामी आदिवासी बन्ने बटोमा अग्रसर हुँदैछौ ।
नेपालको नीतिमा पनि समस्या छ । चीनमा चिनियाँलाई गाह्रो गरेर भएपनि विदेशीलाई सझिलो पारियो । नेपालमाचाहिँ नेपालीलाई सझिलो विदेशीलाई गाह्रो छ । नेपालीबाट त धेरै लगानी आउँदै आउँदैन । विदेशी लगानी नल्याइ त हुँदैन । बढीभन्दा बढी सहुलियत दिएर विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्छ । दुर्भाग्य नेपालमा कुनै ठाउँमा सजिलो, सुविधा र एकरूपता छैन । बैंकिङ सिस्टममा समस्या छ । विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार नीतिमार्फत सुविधा दिन सकिँदैन ? देश विकास गर्नका लागि पैसा त ल्याउनुपर्‍यो नि जसरी भएपनि । एउटा देशको लगानीकर्ताले बैंकबाट पैसा ल्याउँदा किन झञ्झट दिने ? विकसित देशमा स्वदेशी र विदेशीलाई एउटै नीति हुन्छ, यहाँ विदेशीलाई फरक व्यवहार हुन्छ । चाइनामा हेर्नुस् न होटलमा जानुस्, प्लेन चढ्नुस् विदेशी र चिनियाँलाई उही छ । मैले भनेको, हामी डेभ्लपिङ फेजमा रहेकाले लगानीकर्तालाई केही आकर्षण दिलाउनुपर्‍यो । आशा केही नदेखाउने खाली तर्साउने गरेर कसले लगानी ल्याउँछ नेपालमा । चिनियाँ लगानी विश्वको कताकता पुगिसक्यो नेपालमा किन आउँदैन ? भारतमा त्यत्रो बजार छ, चीनको बजार हेरेर भारतीय लगानीकर्ता आउँछन ? तर मैले त यहाँ लगानीको वातावरण बनेको देखेको छैन ।
चीन र भारतसँग साझेदारी
चीन र भारत दुवैले नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर किन भइराखेको छैन अचम्मको कुरा लाग्छ । नेपालमा भारत र चीनको लगानी आउन नदिन तेस्रो शक्ति त कुनै छैन, जसले यो चिज हुन दिइरहेको छैन । शंका त्यहाँनेर छ । दुवै छिमेकी हितैसी छन्, हाम्रो समृद्धिमा साथ दिएका छन् । अरू चिजले खेलिरहेको त छैन भन्ने शंका जान्छ । हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई पत्ता लगाएर रोक्न जरुरी छ । समृद्धिका लागि चीन र भारत दुवैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
आफू कमजोर भएपछि सरकारले नियोजित रूपमा वार्ताको ह...
मोदीको दोस्रो कार्यकाल नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ ...
शी र मोदीबीच सहमति भयो भने मात्र नेपालमा रेल आउँ...
संविधानका राम्रा कुरा किताबका माछा जस्ता भए : राम...
हाम्रो पात्रोको आफ्नै 'कम्युनिटी', अब खरिदबिक्री 'हाम्रो पात्रो'बाटै
काठमाडौंका अग्ला भवनलाई कारवाही गर्न आलटाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो प्रतिवेदन
म्याग्दीका अधिकांश वडा कार्यालय सचिवविहीन
अनौठो ‘चोर’ जसले प्रहरी नै बनेर मोटरसाइकल चोरी गर्‍यो !
दुर्घटना हुन नदिन ‘रेट्रो स्टिकर’
लाखौं मूल्यको चामल कुहिएर खेर जाँदै, सरकार मौन
फेवातालमा छाडिए १० हजार माछाका भुरा
विदेश हुँदा पत्नीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको भन्दै हत्या गरेपछि जन्मकैद
हिजो दिनभर : मन्त्रीहरूलाई १–२ पैसाको लोभ नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, महरा उच्च अदालतमा